Taabit Cabdi “Soomaaliya waxay taal meel aanu ka qaadi karin hoggaan ku yimid hab qabiil iyo laaluush” | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Taabit Cabdi “Soomaaliya waxay taal meel aanu ka qaadi karin hoggaan ku...
Taabit ayaa sheegay inay jiraan dad weli raadinaya in aanu dalku gaarin marxalad ay buslahda codkooda ku doortaan, kuwaasoo abuuraya mowjado kale oo dano gaar ah abuuraya. Guddoomiyihii hore ee Gobolka Banaadir ayaa sheegay in Shalay ay Soomaaliya taal meel aanu ka qaadi karin Hoggaan ku yimid hab qabiil, laaluush iyo mid ay dowlado shisheeye dhabarka ku sitaan.
Shacabku iney doortaan cida ay rabaan waa midda ugu fudud ee lagu heli karo caddaalad, isla-xisaabtan dhab ah iyo hoggaan heelan. Soomaaliya waxey taal meel aanu ka qaadi karin hoggaan ku yimid hab qabiil, laaluush iyo mid ay Dowladdo shisheeye dhabarka ku sitaan. Si ay u guuleystaan dadaallada awoodda loogu celinayo gacanta Dadweynaha, waa inaan u wada midownaa arrinkaas. Kuwa ka cararaya codka dadweynaha waxaa la gudboon iney kala saaraan masiirka Qaranka iyo maalin-joogga qofka.
Previous articleXasuuqii Gololey oo dad loo qabtay iyo cadeymo la helay
Next articleQarixii waddada Afgooye: “Anigoo dhiig iga daadanayo ayaan wiilkeyga kasoo hoos bixiyay nin aan soo gaddiyay”